Wareegga 16-ka Koobka Qarammada Qaaradda Afrika oo caawa la soo gabagabeeyay, xili xulka Tunisia uu rigoorayaal kaga adkaaday Ghana… + SAWIRRO – Gool FM
Wareegga 16-ka Koobka Qarammada Qaaradda Afrika oo caawa la soo gabagabeeyay, xili xulka Tunisia uu rigoorayaal kaga adkaaday Ghana… + SAWIRRO
Dajiye July 8, 2019
(Qahira) 09 Luulyo 2019. Waxaa caawa lasoo gaba-gabeeyay Wareegga 16-ka Koobka Qarammada Qaaradda Afrika 2019, xili xulka qaranka Tunisia uu u gudbay wareega sidded dhamaadka ee tartankan, kaddib markii ay rigoorayaal 5-4 ah ay kaga adkaadeen dhigooda Ghana.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa ku soo idlaatay barbaro 0-0 ah.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta labada xul qaran ayaa waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u fiican, waxayna sameeyeen fursado cajiib ah si ay u dhaliyaan goolal.
Daqiiqadii 73-aad xiddiga Taha Yassine Khenissi ayaa hogaanka u dhiibay xulkiisa qaranka Tunisia, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1-0, kaddib markii uu caawinta goolkan uu ka helay saaxiibkiis Wajdi Kechrida.
Balse xulka qaranka Ghana ayaa waxay heleen goolka barbaraha, kaddib markii uu daqiiqadii 90-aad xiddiga xulka Tunisia ee Rami Bedou uu gool iska dhaliyay, waxayna ciyaarta sidaas ku noqotay 1-1.
Ugu dambeyntii Xulka qaranka Tunisia ayaa iska xaadiriyay wareega siddeed dhamaadka koobka qarammada qaaradda Afrika kaddib markii ay rigoorayaal 5-4 ah kaga adkaadeen dhigooda wiilasha Ghana.
WARBIXIN: Sidee ayey kubadda cagta caalamku noqon lahayd la’aanta Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo?
Paris St Germain oo ku dhawaaqday inay diyaar u tahay iibinta xiddigeeda Neymar Jr